ओलीसँग महन्थ, प्रचण्डसँग उपेन्द्र र बाबुरामको सहकार्य
देशभर आज १८७ जनाको मुत्यु, ८ हजार ४६ संक्रमित थप १० घण्टा पहिले
ओली र नेपाल पक्षको वार्तामा ०७५ जेठ २ गते नै फर्कने सहमति
सत्ताको निर्णायक संघर्ष अझै बाँकी, कस्ले मार्ला बाजी ?
विश्वासको मत लिनु अघि नै माग सम्बोधन नभए फेरि सामूहिक राजीनामा दिने माधव पक्षको अडान
बाँकेमा ८ जना संक्रमितको मृत्‍यु
किन ब्याक भए माधव नेपाल ?
ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके के हुन्छ
आइतबार, जेठ २, २०७८ ०४:५३:२६ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
देशभर आज १८७ जनाको मुत्यु, ८ हजार ४६ संक्रमित थप
विवाह भोज खाएपछि संक्रमण, एकैघरका तीनजनाको मृत्यु
मंगलबार, वैशाख ७, २०७८ खोजतलास
काठमाडौं, ७ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच सहकार्य देखिएको छ । हिजो लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने ३ र अर्का एक गरी ४ सासद नै मन्त्रीको सपथ खान पुगेपछि यस्तो सहकार्य देखिएको हो ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा गएकाहरु मन्त्री खान पुग्नुमा केन्द्रबाट अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निर्देशन नै देखिएको छ । ठाकुर ओलीसँग सहकार्यको पक्षमा देखिदै आएका थिए ।
लुम्बिनीमा ओली ठाकुर सहकार्यले केन्द्रमा समेत तरंग ल्याएको छ । ठाकुरको निर्देशनमा ४ जना मन्त्री बनेपनि उनीहरुविरुद्ध कारबाही बढेको छ । २४ घन्टे अल्टिमेटम दिइएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सांसदबाट नै बर्खास्तीको निर्णय लिने तयारी उपेन्द्र यादव समूहले गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् विजय बहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साल समेतले पार्टी निर्णय विपरित काम गरेकाले निलम्बन गरिएको छ । स्पष्टिकरण सोधिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा संसद पद नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अबलम्बन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि जसपा संसदीय दलको नेता सहशराम यादवको अध्यक्षतामा बैठक बसी बहुमतबाट निर्णय भई अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो । त्यसविपरित जसपाका ४ सांसद गएका थिए ।
यसैगरी, पार्टीको निर्णय विपरित ४ प्रदेश सांसद यु टर्न भएपछि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईलाई धक्का लागेको छ । यसको असर केन्द्रमा ओलीविरुद्ध बन्न लागेको समिकरणमा पनि परेको छ । अब जसपाको एउटा पक्ष ओलीसँग सहकार्य गर्नेतर्फ बढेको छ । यसले जसपाको आन्तरिक राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । जसपालाई फुटको संघारमा पुर्याएको छ ।
जसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रचण्डसँग सहकार्यको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले विभिन्न प्रदेशहरुमा सहकार्य शुरु गरिसकेका छन् । लुम्बिनीमा प्रचण्डसँग उपेन्द्र र बाबुरामको सहकार्य देखिइसकेको छ । केन्द्रमा पनि सहकार्य चलिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ७, २०७८, १२:१४:००
विद्यालय खोल्ने निर्णय अव्यवहारिक बिहीबार, माघ १५, २०७७
खोई जोखिम भत्ता ? बिहीबार, असोज १५, २०७७
डा. केसीको सत्याग्रहलाई खेलाची नसोचियोस् बिहीबार, असोज ८, २०७७
शरीरमा समस्या देखिने वित्तिकै अस्पताल आउने बानी बसालौं बिहीबार, चैत ५, २०७७
एनेस्थेसिया पर्दा पछाडिको हिरो हो बिहीबार, फागुन २०, २०७७
‘महालक्ष्मीलाई हस्ताकला नगरी बनाउछौं’ बिहीबार, फागुन २०, २०७७
जीवन अनुभूतिका विविध पक्ष